Aniga Ayaa Go'aan Ku Gaadhay In Ousmane Dembele Halis Galiyo- Ernesto Valverde Oo Sharaxaad Ka Bixiyay Sababtii Uu Dembele U Safay Kulankii Lyon. - GOOL24.NET
Aniga Ayaa Go’aan Ku Gaadhay In Ousmane Dembele Halis Galiyo- Ernesto Valverde Oo Sharaxaad Ka Bixiyay Sababtii Uu Dembele U Safay Kulankii Lyon.
Tababaraha kooxda Barcelona ee Ernesto Valverde ayaa qirtay in uu isaga ahaa shaqsigii halista galiyay Ousmane Dembele oo dhaawac ka soo laabtay isla markaana sababta ugu noqday in uu dhaawac kale soo gaadhay kulankii Lyon kaas oo uu hadda u maqnaan doono muddo bil ah.
Laakiin Valverde ayaa cadeeyay in kulankii Lyon uu kooxdiisa u ahaa mid muhiimad wayn maadaama oo ay doonayeen in ay u soo baxaan siddeed dhamaadka UEFA Champions league. Demebele oo dhaawac ka soo gaadhay kulankii Royo Vallecano ayaa kulankii Lyon ka ciyaaray 20 kii daqiiqo ee ugu danbeeyay isaga oo badalay Coutinho.
Valverde ayaa cadeeyay in markii ay kooxda Lyon la timid goolka ee ay ciyaartu noqotay 2-1 uu ka fikiray in uu Dembele halis galiyo maadaama oo uu kulankani ahaa mid wax go’aaminayay.
Valverde oo ka hadlaya Demeble ayaa yidhi: “Maalintii ka horaysay wuu cadhaysnaa isagu, laakiin waxaan anigu go’aansaday in aan isaga halis galiyo, sababtoo ah waxa uu ahaa kulan wax badan go’aaminayay. Iyada oo aan tixgalinayay natiijada, waxaan go’aansaday in aan soo galiyo ciyaarta, inkasta oo uu hadda maqnaan doono saddex ama afar todobaad”.
Laakiin Ernesto Valverde oo sharaxaya sidii uu dareenkiisu ahaa ayaa yidhi: “Dareenka aan lahaa ka hor ciyaarta waxa uu ahaa mid fiican, waxa uu isagu ka fikirayay in dhibaato la’aan uu ciyaari karayay wuxuuna doonayay in uu ku soo bilawdo, haddii ayna natiijada ahayn (2-1 kii Lyon ciyaarta ku soo laabtay), isaga maan soo galiyeen”.
Dhinaca kale Valverde ayaa ka hadlay kulanka adag ee ay caawa kooxda Real Betis ku wajihi doonaan Estadio Benito Villamarin iyaga oo waliba kulankii xili ciyaareedkan ee Camp Nou kala kulmay guuldaro 4-3 ahayd.
Valverde oo kulanka Real Betis ka hadlaya ayaa yidhi: “Kulankii hore in badan ayaanu dhibtoonay waananu guuldaraysanay, sidaa daraadeed kulankani waa muhiim. Saddexda dhibcood in badan ayay xisaab leeyihiin, sababtoo ah taas kadib waxaa jiri doona 10 kulan oo kaliya oo hadhsanaan doona”.
Barcelona ayaa haddii ay caawa ka soo guulaysato Real Betis waxay hogaanka ku qaban karaan 10 dhibcood oo saafi ah iyada oo 10 kulan hadhsan yihiin waxaana caawintan wayn siisay kooxda Atletico Madrid oo guuldaro kala kulantay Athletic Bilbao.